Nhau - 15th Anniversary yeTaizhou Lujury Technology Co, Ltd.
15th Anniversary yeTaizhou Lujury Technology Co., Ltd.
Wu Yunfu, sachigaro weTaizhou Lujury Technology Co, Ltd., uye Zhang Juqin, th e maneja wekambani, vakaungana pamwe chete nevamiriri vevanopfuura makumi matatu vatengesi uye vaine hushamwari uye hwakadzama kuchinjana.
Kokorodzano yemusangano haingoreve chete kuti Lujury Technology ichagamuchira iyo nyowani nekutaridzika kutsva, asi zvakare zvinoreva kuti LujuryTechnology ichatarisa zvakanyanya kune manejimendi ezvekutengesa cheni uye nedanho rekushandira pamwe nevatengesi.
Pamusangano, Sachigaro Wu Yunfu akapa hurukuro uye akaita hurukuro yekutaura. Akaratidza kuonga kwake kune huwandu hwakawanda hwevatengesi nekubatana kwavo kwechokwadi uye rutsigiro rurefu.
Pahwaro hwekuongororwa kwakadzama kwemaindasitiri azvino mamiriro, akaronga zvinangwa nemazano ekusimudzira zvine hungwaru, akatsigira kufunga kwekugadzirisa matambudziko, uye kuyedza kuzadza zvikamu zvepamusoro zveindasitiri. Panguva imwecheteyo, inoisa pamberi zvimwe zvinotarisirwa uye zvinodikanwa zvekutaurirana pamwe nekubatana.
Kutanga, taura kutaurirana kuri nyore uye kwakananga, usafunge zvinhu zvakaomesesa;
Chechipiri, kuvimbika, kana zvasvika pakuita, tisingakanganwe moyo wekutanga, senguva dzose;
Chechitatu, ivo vadyidzani vevabatsiri vanogona kuzadzikisa kukwana kwavo ndima dzeindasitiri;
Chechina, kodhi yekuzvibata, kushandira pamwe kwechokwadi, kutsvaga nzvimbo yaunowirirana uchichengetedza misiyano, uye nekukurumidza isa pamberi matambudziko, ari nyore kugadzirisa nenzira yakakodzera.
Zhang Juqin, maneja mukuru weLujuryTechnology, akataura mukutaura kwake kuti anotenda zvikuru kune vanotengesa zvipo zvavo uye nekuedza kwavo kunaka kwezvigadzirwa zvekambani. Zvigadzirwa zvekambani izvi hazvipatsanurike kubva kune zvikamu zvevatengesi, uye chikamu chimwe nechimwe chivimbiso chehunhu hwechigadzirwa.
Mai Zhang vakasimbisa kuti mune ramangwana, ichasimbisa manejimendi ezvekutengesa, uye nekupa akasiyana epamberi manejimendi manejimendi manejimendi kune vanotengesa. Iwo mativi maviri achabatana pamwe zvakadzama kusimudzira hunyanzvi hwekuita mashandiro emapato ese, kudzikisa mashandiro uye kugadzira bhizinesi rakakura kukosha. Iye anotenda zvakatsiga kuti sezvo kambani iri kuramba ichikura, kubatana pakati pemativi maviri kuchange kuri padyo uye pamwechete kukohwa michero yekubudirira.
Munguva nyowani, Taizhou Lujury Technology Co, Ltd Association ichashingairira kupindura gwara renyika uye inofambidzana nenguva dzekubatsira mukuvandudzwa kwesimba idzva remagetsi emagetsi emagetsi eChina, ichishandisa mweya weiyo sikuru uye kubata mhando yacho.